တောင်းပန်စာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » တောင်းပန်စာ
Posted by နောင် ရိုး on Sep 13, 2014 in Arts & Humanities, Copy/Paste, Cultures, Members | 24 comments
“မိန်း အခန်းပြောင်းအိပ်တဲ့နေရာကစ ပြီး(ကဗျာမပါ..) အောက်ဆုံးပိုဒ်ထိ ကျနော် နောင်ရိုး..ရွာထဲက လူကြီးမင်းများကို မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံပြီး ပလီပလာ အာချောင်မိတာ..လာ…တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျ…”
မှတ်ချက် ။ ။ ကျနော် မှားတဲ့အပိုင်းနေရာက စ ပြီး တောင်းပန်ထားပါတယ်…။ ဒီထက် တောင်းပန်ရမယ်ဆိုရင်လဲ … ဖြစ်ပါတယ်..။ ကိုယ့်လူကိုယ် ပြန်မေးကြည့်ပြီး အပေါ်ပိုင်း ရေးထားတာထဲက မှားတဲ့စာကြောင်းလေးများ ရှိရင် ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ…။
ကျနော့်ကို ဆဲချင်ကြလို့၊ ဖနောင့်နဲ့ ပေါက်ချင်လို့ ဖနောင့်ပြင်ပြီး တန်းစီစောင့်နေကြတဲ့…ရွာမှ ရပ်မိရပ်ဖများကို စောင့်နေသေးတယ် ခင်ဗျ..။
နောက် မိနစ် ၂၀ ဆို ပြန်ပါပြီ ခင်ဗျာ..
ဟတ်ကဲ့….။ ဆဲမယ်ဆိုရင်လဲ ဟတ်ကဲ့…ဆဲဂျဘာ…
ကျော်ကတော့ ပြန်မဆဲဘာဝူး….။ နည်းနည်းပါးပါး ပြန်ပြောမိလို့…အကုန်ပေါ်ကုန်ရင်တော့ သိဝူးခင်ည။
မှားသွားတဲ့နေရာများ မေးပြီးမြန်းပြီးရင်လဲ ပြန်ပြောပေးဂျပါအူး…။
ကျနော် စာတင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးများ သိချင်ရင်လဲ…ဟတ်ကဲ့…Offer ထားခဲ့ပေးပါခင်ည…
ကျနော် မချွင်းမချန် ပြောပြပါ့မယ်…။
မိနစ် … ၂၀ ခင်ဗျ
A Bayy layy..
Ma Tar layy…
ဒီလောက် ဆဲတာတော့ ရသေးတယ်ခင်ည
Tay chinn Zoe lay..!!
Tin twayt thayy Pann…
Oke kyarr Myat pout
Pa let Phaung gaung Ohn kg lay..
Tine twayt thayy Pann…
ကျော်သေးပန်းတာ ခင်ဗျား မြင်ခဲ့လို့လား…
ဒါပေမယ့် ကျော်က..လူတော်လူတတ်လိုလို အရေခြုံပြီးတော့…သူများသားသမီး စိတ်ဒုက္ခ မပေးတတ်ဘူး…
အရီး ချာတိတ် တုန်းက မင်းလူ ရဲ့ အစ်ကိုတော် မောင်ဝဏ္ဏ တို့၊ ငြိမ်းကျော် တို့ နဲ့ သူငယ်ချင်း စာရေးဆရာ အောင်ပြည့် ဆိုတာရှိတယ်။
သူ့ဟာသူ တော့ နာမည် ရှိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေ ဘာတွေ တောင် ရိုက်သေး။
သူ့ ဝတ္တု တစ်ပုဒ် ကို အခုထိ မှတ်မိနေတုန်း။
“ပလီနွဲ့လို့ ရီတဲ့သို့ ချစ်သမီး သို့” တဲ့။
စာအုပ်ထဲ မှာလဲ ကလေးလေး ပါးဖောင်းဖောင်း မှာ ပါးကွက် ကျား နဲ့ ရီ နေတဲ့ ပုံလေး။
အဲဒီဝတ္တု အဆုံး က ဘယ်လို ဇာတ်သိမ်းထားတယ် မှတ်လဲ။
အဲဒီ သူ့သမီးလေး သွေးလွန်တုတ်ကွေး နဲ့ သေသွားတာ။
နောက်တော့ အဒေါ် ကို အတင်းမေးခိုင်း ရတယ်။
အဲဒါ သူ့သမီး လေးလား၊ တကယ်လား လို့။
ပုံလေး က သူ့ သမီလေး တဲ့။
ဒါပေမဲ့ တကယ် မသေပါဘူး တဲ့။
ပြီးတော့ သူက ရီပြီး ပြောတယ်တဲ့။
ဇာတ်လမ်း ဆိုတာ ရေးနေတုန်း မှာ ကလောင်လက်ထဲ ပြောင်းချင်သလိုပြောင်း သွားခဲ့တာ ဆိုဘဲ။
ဒါထက် ပိုလှ တဲ့ ဇာတ်လမ်း တွေ ဖတ်ချင်သေးတယ်။
ဒီတော့ ရွာထဲ က ပိတ်သတ်ကြီး လဲ စာရေးဖူးကြတာဘဲ။
A yote ta mar
Mathar R chaung
Phon kyaung ta hnar yuu kg lay yawww
nay kann lar hnin…???
တောင်းပန်ချင်လွန်းလို့ တောင်းပန်ဗျဇီ (ဒေါ်ဇီရဲ့ ဇီမဟုတ်) ပိုစ့်တင်ခဲ့တာ..
မှားတာ ရှိရင် တောင်းပန်မို့….
ကျော့်အပေါ်ပိုင်းလေးများ ကြည့်ပြီး ဘယ်နားမှားနေလဲ ဘူများ ထောက်ပြမလဲ စောင့်နေတာ…
ဘယ်က အရီးအဖွားကြီး ရောက်လာပြီး ဘာတွေ လာပြောတယ် မသိဘူး…
ဒီလိုဘဲ ပြောချင်ရာ ပြောတာ နင့် အဒေါ် မို့ ဟေ့။ lol:-)))
ကျော့်အဒေါ်မှာ နှုတ်ခမ်းမွှေးမပါဘူး ခင်ည…
ဟိုဟာကို နောက်ဆုံးပိုစ့်ဆိုပြီး လေကြီးလေကျယ် အာကျယ်ခဲ့တာ…
နာလဲ ဘိုလို ဖစ်ပြီး အခမဲ့ ရှေ့နေ လိုက်နေမိတယ် မသိ။
ဒွတ်ခ။ (စီဒီ – မွသဲ)
Thay lay …
Née yin gaung khout pee
Bite khout lain swal pee
Pha naunt nae pout tal..
A Kaung Sote yae..!!!
ကြည့်လိုက်တော့ D Post မှာ D သုံးယောက်ထဲ တောင်းကျန်း နေပါ့လား။
မသွားခင်လေး…ထိန်းမှ ထိန်းမှ နောက်မှာ (စီဒီ.နောင်ရိုး) ခံခဲ့အူး…
ခင်ဗျားနဲ့အရီး ဆဲသံဆိုသံလဲ ခုချိန်ထိ နားဝင်ချိုတာပဲ…
အရီးရဲ့ သနလလဲ ခုမှ မြင်ရတော့တယ်..
We should stop here, dear…!
You also should stop that thoughts on that guy since she chooses him over you..
And we will look fwd to Your writing n posts at MG later on since we like the way of your writing.
Tay Nar lay.. !!
Ma Tar Layy..!
Let us stop this issue here… !!
If you continue again, I will kill you..
:-P. ​နောင်​ရိုးက​တော်​​တော်​​အတည်​ကြီး​နောက်​တတ်​တာပဲ။ အဲ့လိုမဟုတ်​သုတ်​ခ ရယ်​စရာဇာတ်​လမ်း​တွေများများ​ရေး။ လူက ရသစုံ ခံစားသွားရတယ်​။ ရန်​ဖြစ်​တာ​တော့ကြည့်​ရဲဘူး။ ​သွေးမြင်​ရင်​​ကြောက်​တယ်​။
ကျော် ပြောတော့ ပြောချင်နေတယ်
ဟိုအဖွီးကျား ကြိမ်းသွားလို့ စတော့ထားတယ်…
ခင်ဗျားလဲ ဒုတိယ မိန်း မဖြစ်စေနဲ့
​နောင်​ရိုးရယ်​ မိန်းလိုလူ​တွေအများကြီးပါပဲကွယ်​။ အစ်​မကိုယ်​တိုင်​လည်းမိန်းလိုဖြစ်​ဖူးပါတယ်​။ (မိန်းရဲ့ဟိုတစ်​​ယောက်​နဲ့ဟုတ်​ဘူး​နော်​.အထင်​မလွဲနဲ့ဦး). အဲ့​တော့နားလည်​ပါတယ်​လို့​ပြောခဲ့တာ။ ဒါ​ပေမဲ့ အစ်​မ ငို​နေတာ​တွေ့တဲ့ အစ်​မပတ်​၀န်းကျင်​က အစ်​မကိုအဲ့ဒီထဲကဆွဲထုတ်​ခဲ့တယ်​။ ဘာ့​ကြောင်​ငိုလည်းမ​မေးဘူး​နော်​။ အဲ့ဒါ​ကြောင့်​​နောင်​ရိုးကို ​ပြောခဲ့တာ​ပေါ့ မိန်းကိုအဲ့ဒီထဲကဆွဲထုတ်​ဖို့။ ဘယ်​သူကမှ နာကျင်​မှုကိုကြာကြာဆုပ်​ကိုင်​မထားချင်ကြပါဘူး။ ​နောင်​ရိုးသာသူ့အ​ပေါ်သူလိုအပ်​ချိနိမှာ​အတူတူရင်​ဆိုင်​​ပေးရင်​ မိန်းက အသိအမှတ်​ပြုလာလိမ့်​မယ်​။ အဲ့လိုမှမဟုတ်​ပဲ တခြားကိုပြသနာသွားရှာ​နေရင်​ ​နောင်​ရိုးကို ပိုမုန်းလာမှာ​ပေါ့။ တတိယလူအ​ကြောင်းမ​ပြောပဲ ​နောင်​ရိုးသူ့ကိုဂရုစိုက်​​ကြောင်း။ သူဝမ်းနည်း​နေတာနဲ့ထပ်​တူခံစားရ​ကြောင်း ပြလို့ရတယ်​​လေ။ ဒါအခွင့်​​ကောင်းပဲ။
Wait long long.. (In singlish)
ရွာထဲက ကိုကို မမ တွေကိုမငြိတဲ့ စာကောင်းလေးတွေရေးစမ်းပါဗျ
အနော်လဲ တောင်ပန်းချဉ်ဒယ်… ဒါပေမဲ့ ဗလိုင်းဂျီး တောင်ပန်းရဒါ အတံဖူး..။
ကဲ တလက်စတည်း ရှင်းလိုက်ရအောင် …
သုဘရာဇာ သံချောင်းဆိုတာ ကျုပ်ပဲ ……
ကျုပ်ခင်ဗျားကို တင်းရတာ အချက်(၂)ချက် ရှိတယ်။
၁ ကျုပ်တို့က ကာယကံရှင် ကလေးမ တကယ်ဆုံးပီ မှတ်လို့ အသည်းအသန် ဖုံးတွေဆက် အကြောင်းတွေ ကြားခဲ့ရတာ ဆိုတော့ လူတဦးတယောက် အပေါ် မကျေနပ်ချက် ခံစားချက်တခု အတွက်နဲ့ ခင်ဗျား လုပ်ခဲ့ ရေးခဲ့လိုက်တာကို တင်းတယ်။
၂ ကတော့ ခင်ဗျား ရေးရေးနေတဲ့ ဟိုတယောက်ဆိုတာကို မသကါ မကျေနပ်ရင် ချောင်းရိုက် ဒဲ့ရိုက် လူငှားရိုက်ပေါ့ … ဘယ်နဲ့ မိန်းကလေး တယောက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ဒီလိုချရေး လိုက်တော့ အခုကျ မသိတဲ့ သူတွေတောင် အကုန်သိကုန်ပီ … သူ့နေရာ ကျုပ်ဆို အခုကျမှ တိုက်ပေါ်က ခုန်ချတော့မှာ ….
ဒါဘဲ မကျေနပ်ရင် လဲသေလိုက်တော့
ကိုရင်နောင်ရိုးပို့စ်တင်တာမှာ..” ကောင်းကင်ပြာ”ဆိုတဲ့ မင်န်ဘာရဲ့အမည်ရော..ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုရော…တည့်တည့်ကြီးစွက်ဖက်ရေးတင်လိုက်ပါတယ်…
စေတနာရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမယ့်.. ဒီအရေးအသားဟာ .. ကောင်းကင်ပြာအပေါ် တခြားခင်မင်နေသူတွေကိုပါ ထိခိုက်သွားတယ်လို့မြင်ရပါတယ်…။
နောက်.. ကောင်းကင်ပြာ တင်လာတဲ့ပို့စ်အရ.. သူလည်းသဘောမတူကြောင်းပြောပါတယ်..။
ဒါဟာ…. ကာယကံရှင်က.. ကိုယ်တိုင်ကန့်ကွက်တဲ့သဘောပါ..။
မူလပို့စ်အောက်မှာလည်း.. ကျုပ်အပါအ၀င်.. ရွာသူားတွေတော်တော်များများ.. အဓိပ္ပါယ်ကောက်ပြီး… ရေးကြတာကိုလည်းတွေ့ရတာမို့…
တကယ်မဟုတ်ကြောင်းသိတဲ့အခါ.. ကော်မန့်ဝင်ရေးသူအားလုံးကို.. ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့.. ယူဆပါတယ်..။
(ကိုရင်နောင်ရိုး… တောင်းပန်စာတင်ထားတာမို့.. ပွိုင့်၁၀၀၀ မနှုတ်ပါ..။
ဒါပေမယ့်.. တင်ထားတဲ့ပို့စ်နဲ့ ..ဆက်စပ်အားလုံးကို.. မော်ဒီရိတ်တာတချို့ရဲ့ ဆန္ဒအရ.. ပထမစာမျက်နှာကနေ..ဖယ်ပြီး.. ကော်မန့် OFF လိုက်ပါကြောင်း…)
ဖြစ်နိုင်ရင်.. (ဖြစ်နိုင်ရင်) ရွာသူားများကလည်း.. ဒီအကြောင်းဆက်မရေး/မပြောကြစေချင်..။